Zviise pachena iwe mubhawa yehotera, tora mukana wemusikana webasa, uye uunze vana vako!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Zviise pachena iwe mubhawa yehotera, tora mukana wemusikana webasa, uye uunze vana vako!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Unogona kuda iyi hotera. Management inoda kukupa iwe chakasiyana chiitiko. Inokukurudzira kuti uzviburitse mubhawa. Upombwe hunogamuchirwa. Ihotera zvakare ine vanamukoti vane hunyanzvi vanowanikwa panguva dzemanheru kuisa vana vako pasi. Mushure mezvose iyi Hotera iri muBeijing ine ushamwari hwemhuri.
Paunobuda muhotera yedu pakupera kwezororo rako, unenge usina tariro! Upombwe hunokurudzirwa.
COVID yakachinja mafambiro uye kushanya, kusanganisira mahotera nenzvimbo dzekuchengetedza, kusanganisira indasitiri yese yekugamuchira vaeni.
Ko zvakadii nezve kuburitswa kudiki muhotera bhawa. Uya nevana vako nekuti hupombwe hwakanaka. Izvi zvinogona kungogoneka muChina, kana izvi zvakarasika mushanduro?
Nemhando yegore ratakange tichive naro kutenderera pasirese, dzimwe nguva midhiya enhau inogona kuunza kupukunyuka isu tese zvatinoda pakupera kwezuva.
COVID yachinja indasitiri yekugamuchira vaeni. Ndiani anoti pasocial media haina kunyatsonaka kune chero chinhu kunze kweavo vanoda kuzvishambadza neimwe nzira, chimiro, kana fomu?
Shamwari yakaenda kuBeijing nguva pfupi yadarika uye yakapihwa bhurocha iri nehotera. Rinokosha. Ari kuichengeta uye achiiverenga pese paanoda kuseka kwakanaka. Zviripachena, rakashandurwa zvakananga, izwi neshoko, kubva kuMandarin kuenda kuChirungu.
Mumiriri wedu anoita kuti iwe umirire kunhandare yendege. Bhazi rinoenda kuhotera rinomhanya nemahombekombe egungwa. Munguva pfupi iwe unonzwa kunakidzwa nekupfuura mvura. Iwe uchaziva kuti wave kusvika padhuze nehotera, nekuti iwe uchatenderera nekutenderera. Mutungamiri achakumirira iwe muhoro yekupinda. Anogara achiedza kurara nevashanyi vese vatsva.
Iyi hotera yemhuri, saka vana vanogamuchirwa. Isu zvirokwazvo tinogara tichifara kugamuchira upombwe. Vanamukoti vane hunyanzvi vanowanikwa mumanheru kuti vaise pasi vana vako. Vaenzi vanokokwa kuti vagare mubhawa uye vazviratidze kune vamwe. Asi ndokumbirawo muone kuti vakadzi havabvumidzwe kuita vacheche mubhawa. Isu tinoronga mitambo yemagariro, saka hapana muenzi anombosiiwa ari oga kutamba navo.
Menyu dzedu dzakanyatsosarudzwa kuve dzakajairika uye dzisinganakidze. Pakudya kwemanheru, quartet yedu inotenderera kubva patafura kuenda patafura uye fiddle newe.
Imba yega yega ine zvivakwa zvakanakisa zvezvikamu zvako zvakavanzika. Munguva yechando, imba yega yega iri pakupisa. Imba yega yega ine balcony inopa maonero eakanyanya kusvibiswa! Iwe haungavhiringidzwe neruzha rwemotokari nekuti mugwagwa uri pakati pehotera nedziva unoshandiswa chete nevanofamba netsoka.
Mubhedha wako wakagadzirwa zvinoenderana netsika dzemuno. Kana iwe uine mamwe mazano, ndokumbira unyorere musikana wepamoyo. Ndokumbira utore mukana wake. Achave anofara kwazvo kukwiza shati dzako, mabhurauzi uye zvemukati. Kana akabvunzwa, iyewo achasvina bhurugwa rako.
Paunotisiya panopera zororo rako, unenge usina tariro. Uchatambura kukanganwa.
Saka, uri kuronga yako rwendo rweBeijing?